Sida loo sameeyo moodboard-ka: waxa uu yahay iyo tillaabooyinka fudud ee lagu nashqadeeyay | Hal-abuurka khadka tooska ah
Sida loo sameeyo guddiga niyadda
Marka aan naqshadeyno, waxaan qorsheyneynaa waxa aan dooneyno inaan u sheegno. Habkani wuxuu noqon karaa mid adag oo kharash badan marka loo eego wakhtiga, maadaama uu u baahan yahay falanqayn ballaaran si habka fikradda oo dhan, taas oo ah, dhammaan habka la xidhiidha naqshadaynta iyo naqshadaha ugu horreeya, waa sax.
Si habkan looga dhigo mid aad u xiiso badan, nooc ka mid ah farsamada ayaa la nashqadeeyey taas oo fududaysay oo soo koobtay falanqaynta oo dhan qaybo kala duwan oo muuqaal iyo muuqaal ah. Farsamadan waxaa loogu yeeraa Moodboard-ka maantana, waa qeyb ka mid ah naqshadeynta garaafyada sida naqshadeynta astaanta.
Post this Waxaan u nimid inaan kaala hadalno waxa farsamadan cajiibka ah ay bixiso iyo sida loo naqshadeeyay. Haddii aad rabto inaad yarayso wakhtigaaga qaabaynta oo aad isticmaasho ujeedooyin kale oo kaa caawinaya inaad gaadho ujeedadaada bilowga ah ee mashruucaaga, ma seegi kartid waxa soo socda.
1 Mood board: waa maxay
1.1 Maxaa loogu talagalay
2 Sida loo naqshadeeyo guddiga niyadda
2.1 Fikrado ama ereyo qeexaya shaqada
2.2 Raadi waxyaabaha ku caawinaya
2.3 Ka fikir qaybaha kale
2.4 Dooro oo bilow naqshadaynta
2.5 habka dhamaadka
3 Qalabka lagu naqshadeeyo moodboard-ka
3.1 tag niyadda guddiga
Mood board: waa maxay
guddiga niyadda waxaa lagu qeexaa nooc ka mid ah farsamada ama qalab muuqaal ah. Waxaa jira noocyo badan oo looxyada niyadda ah laakiin inta badan waxaa lagu soo bandhigaa muuqaal ahaan ama garaaf ahaan. Waxay u egtahay in ay la xiriirto waxa aan u naqaanno collage, laakiin way ka baxsan tahay isku-dhafka fudud.
Waa isku dhaf dhammaan fikradihii iyo gunaanadkii aan ka helnay weji dheer oo falanqayn ah. Si aad si fiican u fahanto, waa natiijada ugu danbeysa ee dhamaan ku jeesjeestii maskaxda ee aanu ku jirnay intii lagu jiray habka tafatirka.
Moodhku wuxuu leeyahay ujeedooyin mashruuc oo kala duwan, laakiin qaar ka mid ah waxaa loo kala saaraa sida:
Waa aalad awood u leh in uu beddelo fikradaheena (fikradaha) qaab muuqaal ama muuqaal muuqaal ah. Waxay soo koobaysaa wax kasta oo maskaxdeena ku jira waxayna siisaa qaab, midab iyo muuqaal gaar ah.
Waa la muujiyay Marka aan naqshadeyno moodboard-ka goobtayada hal-abuurka ayaa kordha. Mana aha wax sixir ah, laakiin waxaynu ka shaqaynaa qayb maskaxdeena ka mid ah oo si gaar ah ugu heellan hal-abuurka iyo shaqada shakhsi ahaaneed. Waa waxa la saadaaliyay si loo damiyo moodboard-ka, hal-abuurka iyo shakhsiyadda naqshadeeyaha ee ka soo horjeeda fariinta uu rabo inuu la xiriiro.
Haddii aad ku jirto marxaladda naqshadeynta halkaasoo aad istaagtay oo aadan heli karin waddo aad ka baxdo, naqshadeynta guddiga niyadda ayaa ku fiican xaaladdan oo kale. Aynu nidhaahno waa halbawlaha nololeed ee fadhiidnimada faneed, maadaama ay gacan ka geysaneyso in si wanaagsan loo caddeeyo fikradaha iyo in la habeeyo oo la geliyo khaanado u dhigma.
Marka aan naqshadeyno moodboard-ka, waa inaan sidoo kale cadeynaa oo ogaanaa waxa aan gudbineyno ama gaarsiineyno fariinta dhagaystayaasheenna oo arki doona. Taasi waa sababta moodboard-ka ay tahay in loo qaabeeyo si ula kac ah. Meelaynta iyo nidaamka dhammaan walxaha waa in ay raacaan tilmaamo iyo sabab. Sababtan awgeed, uma fakari karno si aan kala sooc lahayn, maadaama hawshu ay tahay in ay noqoto mid toosan oo la socota dhammaan fikradaha aan ku hayno maskaxdeena.
Marka la soo koobo, waa nooc ka mid ah armaajooyinka halkaasoo dhammaan masiibooyinka maskaxdeena lagu abaabulo.
Sida loo naqshadeeyo guddiga niyadda
Fikrado ama ereyo qeexaya shaqada
Waxa ugu horreeya ee ay tahay in aan xisaabta ku darno waa waxa moodboard-keena uu ku salaysnaan doono, dhagaystayaashu, ujeeddadee, mawduuca aynu adeegsan doonno. Si aan uga jawaabno su'aalahan oo dhan waa inaan samaynaa liis ballaadhan oo leh fikrado noo soo dhawaynaya jawaab cad. Fikradahani waxay noqon karaan kuwo u dhow ama ka fog mashruucayaga ama waxa macmiilku rabo. Waxaa lagu talinayaa in la qoro wadar ahaan 10 fikradood oo muhiim ah oo aad kala doorato 5ta hore. Inta yar ee aad ku darto, way kuu fududaan doontaa inaad go'aansato hadhow, laakiin fikrado yar ayaa aad yeelan doontaa. Inta badan oo aad wax qorto, way adkaan doontaa inaad doorato, laakiin fikrado badan oo aad hadhow soo hindiso. Adiga ayaa dooranaya.
Raadi waxyaabaha ku caawinaya
Qodob muhiim ah oo wanaagsan oo u adeega si aad u bilowdo fikradahaaga ugu horreeya, shaki la'aan waa sawirada. Sawiradu waa walxo muuqaal ah oo muuqaal ah, taas oo ay ugu wacan tahay dhismaha iyo midabada kugu jira, waxaad bilaabi kartaa fikrad qiyaas ah oo ah waxaad rabto inaad gudbiso. Sababtan awgeed, waa muhiim inaad haysato sawirro sawirro ah, oo aan aad u ballaadhanayn, laakiin inta badan oo aad hesho, fikrado badan ayaad yeelan doontaa.. Waad ku mahadsan tahay jimicsigan maskaxeed, waxaad kordhisaa hal-abuurkaaga iyo fursadaha aad ugu dhawaanayso yoolkaaga kama dambaysta ah ayaa kordha.
Ka fikir qaybaha kale
Markaan ka hadlayno canaasiirta, waxaan tixraacnaa dhammaan walxahaas oo noqon kara garaaf ama muuqaal oo kaa caawin kara habka hal-abuurka. Boodhka niyadda waxa lagama maarmaan ah, marka lagu daro sawirrada, inaad sidoo kale samayso baadhitaan ballaadhan oo aad ku raadinayso curiyeyaasha kale sida textures, chromatic khadyada, xarfaha kuwaas oo ku siin kara dabeecad ku habboon oo ku habboon mashruucaaga iyo codka fariinta. waxaad rabtaa inaad la xiriirto. Marka la soo koobo, ha la joogin hal shay oo keliya, maxaa yeelay waa muhiim inaad maskaxda ku hayso dhammaan kuwa kale.
Dooro oo bilow naqshadaynta
Mar alla markii aad haysatid dhammaan alaabta miiskaaga ama kombayutarkaga, waa waqtigii aad bilaabi lahayd doorashada ugu danbeysa iyo wejiga ugu dambeeya ee tuurista. Sababtan awgeed, waa inaad iska tuurtaa oo aad tirtirtaa waxyaabaha aan kuu adeegeynin, laakiin kuma filna inaad tirtirto, waa inaad haysataa sabab cad oo ay tahay inaad ka fikirto kahor. Mararka qaarkood, looxyada niyadda ugu fiican ayaa lagu sameeyay walxo dib loo warshadeeyay oo qashinka laga soo qaaday. taas oo ah, curiyayaasha la tuuray laakiin, marka la eego isbeddel yar, waxay noqdeen xubno lama huraan u ah moodboardkaaga.
Haddii aad gaarto wejigan ugu dambeeya, waa sababtoo ah waxaad mar hore dooratay walxahaas aad rabto inaad ku aragto guddiga niyadda. Taasi waa sababta marxaladda ugu dambeysa, kaliya ay tahay inaad hagaajiso. Amarka ka kooban sawirro taxane ah ka hor natiijada kama dambaysta ah iyo inaad sidoo kale go'aansato midka aad dooranayso. Markaad samaysato moodboard-ka, waa inaad soo bandhigtaa. Si aad u soo bandhigto, waxaa muhiim ah inaad muujiso habka aad u qaabaysay, sababtoo ah waxaa muhiim ah in dadweynahaaga ama macmiilku fahmaan halka ay ka yimaadeen dhammaan walxahan.
Qalabka lagu naqshadeeyo moodboard-ka
tag niyadda guddiga
Qalabkan, waxaad awoodi doontaa inaad naqshadayso looxyada niyadda ee ugu fiican khadka. Waxaa lagu gartaa inay tahay qalab si fudud loo maamuli karo. Intaa waxaa dheer, uma baahnid inaad abuurto akoon hore, ama isdiiwaangeli ama gasho. Qalabkan waxaad ku bilaabi kartaa naqshadeynta dhib la'aan. Waxa ay ku siinaysaa taxane maran oo aad ka soo bilawdo xoq ama haddii aad doorbidayso, waxa kale oo aad haysataa qaabab taxane ah oo mar hore loogu talagalay isticmaalka suurtogalka ah.
Niice waa mid kale oo ka mid ah qalabka xiddigaha si loo naqshadeeyo moodboards, waxaa lagu gartaa qaybta ballaaran ee sawirada ay leedahay, habkan, waxaad awood u yeelan doontaa inaad naftaada dhiirigeliso oo aad sameyso moodooyinka ugu fiican ee aad waligaa qiyaasi lahayd. Muuqaal kale oo Niice ah oo lagu xisaabtamayo waa inuu leeyahay kordhinta Chrome-ka, kaas oo kuu oggolaanaya inaad kaydiso oo aad soo dejiso sawirrada markaad baadhayso internetka. Its interface waa mid aad u fudud in la isticmaalo, waxa kaliya ee ay tahay in aad samayso waa jiidi canaasiirta in aad xiisaynayso in nooc ka mid ah meel bannaan. Shaki la'aan waa mid ka mid ah qalabka ugu fiican ee lagu bilaabi karo naqshadeynta.
Canva ma seegi karin dabaaldega midabada iyo midabada. Waa mid kale oo ka mid ah codsiyada inta badan laga isticmaalo intarneedka ee naqshadeeyayaasha iyo isticmaalayaasha badan.. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay buug-gacmeedyo ballaadhan oo la heli karo, badidoodu waa bilaash, inta soo hadhayna waa qaali. Ma aha oo kaliya inay leedahay qaab-dhismeedka, laakiin waxaad heli kartaa far badan oo caan ah iyo midabyo badan. Kaliya waa inaad iska diiwaan gelisaa iimaylka ama akoonkaaga Facebook oo aad ku raaxeysan kartaa adeegyada kala duwan ee ay bixiso. Shaki la'aan, waa qalabkii loo isticmaalay sanadihii ugu dambeeyay.
Sidoo kale ma aynu ka tagi karno aaladda xiddigaha ee hal-abuurka iyo dhiirrigelinta internetka. Pinterest waxay hore u lahayd in ka badan 1 milyan isticmaale. La yaabna maaha sababtoo ah waxay soo bandhigaysaa looxyo hal abuur leh oo taxane ah oo ay ku raran yihiin sawirro iyo sawirro si ay kuu dhiirrigeliyaan. Si aad u bilowdo geeddi-socodkaaga hal-abuurka ah, kaliya waa inaad abuurtaa guddidaada koowaad, barnaamijku wuxuu si toos ah u keydin doonaa walxaha ku xiisaynaya iyo mashiinka raadinta bilawga ah wuxuu ku tusi doonaa naqshadaha la midka ah iyo kuwa ku dhow dhadhankaaga. Shaki la'aan yaab.
Naqshadeynta looxa niyadda maaha mid la mid ah naqshadeynta isku-dhafka fudud. Laakiin, sida aan awoodnay inaan xaqiijino, isku-dhafka iyo nidaamka macquulka ah ee dhammaan walxaha ka kooban mashruucayaga. Naqshadeeyayaal badan ayaa doorta inay qaabeeyaan moodboards-ka jir ahaan ka dibna digitize.
Sidan oo kale waxay ku ciyaari karaan gacanta ugu horeysa ee walxaha leh, taabta muuqaalkooda oo u arkaan midabada si dhab ah. Waa hab wanaagsan oo aad si fiican u sugi karto mashruucaaga.
Mar dambe ma haysan doontid cudurdaar aad ku bilowdo naqshadayntooda, sababtoo ah waxaan rajaynaynaa in dhammaan talooyinka iyo qalabka aan soo jeedinnay ay ku caawin doonaan adiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sida loo sameeyo guddiga niyadda
yaa abuuray youtube